गिरिजाले प्रचण्डसँग चुरोट सल्काउँदै यसरी साथ मागेका थिए (प्रचण्डसँग अन्तरवार्ता) | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेपालका कम्युनिष्ट राजनीतिज्ञ, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष हुन् । झण्डै १३ वर्ष भूमिगत जीवन बिताएका उनी २०६२–६३को जनआन्दोलन पछि खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । खुला राजनीतिमा आएसँगै दुई पटक देशको प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । साथै पछिल्लो समय भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तनका मुख्य पात्र पनि हुन् । अहिले एमाले र माओवादीबिच पार्टी एकता अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने दुई दलबिचको गठबन्धनको सरकार बनिसकेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डसँग शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातदेखि अहिलेसम्मको यात्राका बारेमा खोतल्ने प्रयास गरेका छाैैं ।
शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने क्रममा तपाई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीचको सम्बन्ध कसरी सुमधुर बन्न पुग्यो ?
गिरिजा र तपाईबीचको पहिलो भेट कस्तो भयो ?
पहिलो भेटमा नै हामीबीच छिचोलिएर कुरा भयो । भरोसाका साथ कुरा भयो । उहाँले म अगाडि बढ्छु, तपाईको साथ चाहियो भन्नुभयो । संविधानसभा, गणतन्त्र, राजतन्त्रलगायतका विषयमा कुराकानी भएको थियो । त्यसपछि पछाडि नफर्कने गरी लगातार कुराकानी भयो । पहिला नेपाली कांग्रेस, गिरिजा र हाम्रोबिचमा निकै ठूलो अविश्वासको खाडल थियो । पहिलो भेटबाट नै त्यो खाडल पुरिएको अनुभूति मैले गरेँ ।
यो पनि पढ्नुहोस नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूकाे भेला तयारी अन्तिम चरणमा
यो पनि पढ्नुहोस रुकुमको एक विद्यालयमा अध्ययनरत आधाभन्दा बढी विद्यार्थी एकैपटक बिरामी
अहिले भर्खर कार्यान्वयनको चरण भएकाले कोही कसैलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ । समस्या मात्रै देखिन सक्छ । तर विस्तारै सबै ठिक हुन्छ । अब पछाडि हट्ने भन्ने कुरै छैन । स्रोतः रिपोर्टर्सनेपालबाट
१३,चैत्र.२०७४,मंगलवार १०:०० मा प्रकाशित
← महानगरका अवैध होर्डिङबोर्ड र विज्ञापन हटाउन सुरु, कम्पनी सम्पर्कमा नआए कारबाही
दशकै प्रमुख भन्सार नाका वीरगन्जको व्यापार घाटा दुई खर्ब ५९ अर्ब →